Ukudanisa ebumnyameni nguBruce Springsteen - Izinto Zobugcisa
Ukudanisa ebumnyameni nguBruce Springsteen
USpringsteen wabhala oku ngobunzima bakhe bokubhala ingoma engatshatanga kunye nokukhathazeka kwakhe ezama ukubhala iingoma ezizokukholisa abantu. Imizabalazo yakhe ithululela kwi-lyric, apho uziva ngathi ngompu oqeshiweyo uswele isenzo esithile. Ude athethe nakwitrope trope, athe wayiva amaxesha amaninzi ngaphambili:
Bathi kufuneka uhlale ulambile
hay sana ndisondele endlaleni nje ngokuhlwanje
Okumangalisayo kukuba, le ngoma yayingumntu ongatshatanga-eyona nto yayinkulu kakhulu kwimisebenzi yakhe ngokwe-chart yase-US. (Nangona ikhava kaManfred Mann ye-Springsteen's 'eyimfama ngokuKhanya' yenziwe # 1.)
Le yayiyingoma yokugqibela ebhalelwe u Yehova Uzalelwe eU.S.A. . U-Springsteen wayibhala emva kokuba umphathi wakhe, uJon Landau, efune i-albhamu engatshatanga. Emva kwempikiswano emfutshane, wathobela kwaye wayibhala ngobo busuku-ityala eliqhelekileyo lomphathi okanye irekhodi elilawulayo lokufumana umculi okhutshiwe kangangokuba amajelo ombane abetha, ebanika kanye le nto bebeyifuna.
U-Springsteen wayesenza kakuhle, ene-albhamu ephumeleleyo kwi-discography yakhe kunye nedumela lekhonsathi elingenakulinganiswa. Wayeneengoma ezingaphezulu kwama-70 ezibhalelwe Uzalelwe eU.S.A. , Kodwa uLandau wayefuna ukubethelwa ngokuqinisekileyo ukuqinisekisa ubume be-superstar ye-Springsteen. 'Ukudanisa ebumnyameni' kubonelelwe nje ngaloo ntlantsi; ikhutshwe njengowokuqala (omnye kuphela okhutshwe ngaphambi kwe-albhamu), yaqala umlilo owawukho Uzalelwe eU.S.A. Iingoma zika-Springsteen zakhawuleza zazisasazeka kunomathotholo, kwaye wafumana abaphulaphuli abatsha. Ngokungafaniyo nabaninzi bamagcisa amatye abatyholwa ngokuthengisa xa bebetha kakhulu, ukujika kwenkwenkwezi kukaSpringsteen kwamkelwa (ubukhulu becala) ngabantu bakhe abathembekileyo, ababechithe iminyaka emininzi besasaza ivangeli yakhe.
Ekhokelwa nguBrian DePalma, le vidiyo yathathwa ngexesha lekonsathi ka-Springsteen eSt.Paul Civic Centre eMinnesota nge-29 kaJuni ka-1984. U-Courteney Cox, owayetyalwe kubaphulaphuli, wafumana indima yomlandeli othandekayo ngaphambili. ukudanisa eqongeni noBruce. (Ngaphandle kwesihloko somculo, umdaniso wenzeka ngokukhanya okuhle.)
USpringsteen wenza 'ukuDanisa ebumnyameni' embindini womboniso, ke ngelo xesha wayelungile kwaye ebile kwaye isihlwele sasisetyenzisiwe saba sisiphithiphithi. Ukufumana isibhamu, u-Springsteen wayenza le ngoma kabini, nge-DePalma ebeka kwakhona iikhamera zakhe emva kokuthabatha okokuqala.
Ividiyo yayiyi-Springsteen yokuqala ukufumana i-airplay enzima kwi-MTV, kwaye yamazisa kubantu abatsha, uninzi lwabaphulaphuli. Ngokuphathelele uCox, kwiminyaka embalwa kamva wadlala indima kwi-sitcom Amaqhina osapho , Kwaye ke inkwenkwezi kolu thotho ethandwayo TV Abahlobo .
Ingoma imfiliba, njengoko uSpringsteen ecula imigca enje, 'Mntu andiyi ndawo, ndihlala nje kwindawo yokulahla enje.' Ayinaso isiphelo esonwabisayo, kodwa ukuphela kwengoma, ubonakala enomdla wokuthatha amanyathelo athile, ekhangela intwana yokuphefumlelwa ukuba immise endleleni yakhe - ngapha koko, awunakuqala umlilo ngaphandle kwentlantsi.
Ngendinyana yokugqibela, kukho ukubakho kwezinto ezikhoyo, njengoko ebeka izinto ngendlela efanelekileyo: 'Awunakuqala umlilo ukhathazeke malunga nelizwe lakho elincinci eliwayo.'
Umyalezo onzulu, wefilosofi ulahlekile kubaphulaphuli abaninzi ababengeniswe yintsimbi ebambekayo (ividiyo ayikhange ishukume intsingiselo enzulu nokuba). U-Springsteen wafumana impendulo efanayo kwingoma yakhe ' Uzalelwe eU.S.A. , 'apho umyalezo ulahlekile kumculo. Leyo yamkhathaza, njengoko ingoma imalunga nengxaki yegqala laseVietnam elibuyela ekhaya kwimpi nasekungakhathalelweni.
Oku kwaphumelela iSpringsteen iGrammy yakhe yokuqala. Ngo-1985, yafumana ibhaso le-Best Male Vocal.
Le ngoma ithumele i Uzalelwe eU.S.A. I-albhamu kwi Iyonwabisa -ukubaleka kwempumelelo kwitshathi, kunye neengoma ezithandathu ezilandelayo ezifikelela kwi-Top 10 yase-US.
'Ndigqume' (# 7)
'Wazalelwa eMelika' (# 9)
'Ndisemlilweni' (# 6)
'Iintsuku Zozuko' (# 5)
'Ndihamba' ezantsi '(# 9)
' Idolophu Yam '(# 6)
Umbono wokuqala wevidiyo yomculo yayikukuba uSpringsteen adanise ngokoqobo ebumnyameni-wadutyulwa ngokuchasene nemvelaphi emnyama. UJeff Stein wayengumlawuli, kunye noDaniel Pearl, odumileyo kwimiboniso bhanyabhanya kwi ' Umphefumlo ngamnye omthathayo , 'wayengumlawuli wokufota. U-Pearl no-Springsteen bangene kwi-kerfuffle malunga nendlela ekufuneka edutyulwe ngayo, u-Springsteen efuna isihluzi kwaye u-Pearl wanyanzelisa ukuba kukhanyiswe kanzima. UBruce uphume emva kokuthatha ezimbalwa, kwaye wagqibela ngokudubula ividiyo noBrian DePalma. Kwiminyaka embalwa kamva, ngaphandle kwemizamo yakhe yokuphepha uSpringsteen, uPearl wazifumana esebenza kwividiyo ethi 'Human Touch'. U-Pearl uthi u-Springsteen waxolisa nge-'Dancing In The Dark 'kwaye wafuna ukusebenza naye kwakhona, kuba wayeqonda ukuba uPearl wayenyanisile ngokukhanyisa.
Umntu ongomnye wakhululwa ngomhla we-3 kaMeyi, ngo-1984 kwaye wafikelela kwitshathi ye-US ephezulu ye # 2 ngoJuni 30, eyayingaphambi kokuba ividiyo ibethe MTV. Kule veki, 'iReflex' nguDuran Duran wayibamba kwindawo ephezulu; Ngenkxaso yeMTV, 'Ukudanisa ebumnyameni' kujongeka ngathi kubhejwa ngokuqinisekileyo nge # 1, kodwa emva koko uPrince kunye namahobe akhe alilayo babonakala, belawula iMTV kunye namaza omoya, kwaye bagcina ingoma kaSpringsteen kwi # 2 kwiiveki ezintathu ezizayo.
Ngo-1985, uTina Turner wenza oku kuye UmDanisi wangasese ukhenketho. Inguqulelo yakhe ivela kwi-albhamu UTina Turner -Hlala eTokyo .
Isimbozo esithandekayo sale ngoma yayiliqela i-Big Daddy, eyabetha # 21 UK ngohlobo lwayo. Ingcamango emva kweBig Daddy kukuba i-band crash yafika kwisiqithi ngelixa iphuma kwi-50s okanye ekuqaleni kwee-60s, kwaye xa behlangulwa ekuqaleni kwee-80s, bazama ukuvuselela umsebenzi wabo. Umculo wawutshintshile kakhulu ngelo xesha, ke baqala ukugubungela umculo wee-80s kwisitayile kuphela ababesazi ukuba badlala njani. Iziphumo ziluhlobo lwesandi sanamhlanje sePat Boone.
Ngo-1985 Amatye agiqekayo I-poll yomfundi, oku kwavotelwa uNyaka omnye.
Ngoku ka Amatye agiqekayo , le kuphela kwengoma ka-Springsteen eyakhe yagutyungelwa nguBob Dylan, kwaye wayenza kwaba kanye: kwiklabhu yeToad's Place eNew Haven, eConnecticut, ngobusuku bangoJanuwari 12, 1990. UDylan wahlambalaza uninzi lwamagama nomsebenzi yayinzima kangangokuba uninzi lwabaphulaphuli lwalungakhange luqonde ukuba yeyiphi ingoma de ibhendi yabetha ikorasi.
ngokuqinisekileyo ibali lentombazana
Inombolo yeengelosi ezili-9 ezinentsingiselo
Iimbaleki zobusuku ezinzulwini zobusuku ziza eileen
sisaqhubeka nokuzonwabisa kwaye usengomnye womculo
Nick lowe yintoni ehlekisayo 'uxolo, uthando kunye nokuqonda?